အဲလ်တီချိုဟူသည်.......: ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ဝေဝါးလာတိုင်းဖတ်ဖို့။ အချက်လေးချက်
ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ဝေဝါးလာတိုင်းဖတ်ဖို့။ အချက်လေးချက်
ဘ၀မှာလျှောက်လှမ်းနေရတဲ့ လမ်းခရီးက ခက်ခဲကြမ်းတမ်းရင် ကျော်ဖြတ်လို့ရနိုင်ပါသေးတယ်။ ကိုယ်ဘယ်ရောက်မှန်းမသိ၊ ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိဘဲ စမ်းတ၀ါးဝါးနဲ့ လမ်းပျောက်နေတာက ပိုဆိုးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဘ၀အချိူးအကွေ့တွေရောက်တိုင်းမှာ ရှေ့ဆက်ပြီး ဘယ်လမ်းကိုလျှောက်ရမှန်းမသိဘဲ လမ်းပျောက်သွားတဲ့ အခိုက်အတန့်တွေကြုံဖူးကြမှာပါ။
ဒီလိုအတွေးတွေဝင်ပြီး ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိဘူးဆိုရင် ဒီအချက် ၄ ချက်ကိုလိုက်လုပ်ကြည့်ပါ။
၁။ စိတ်ကိုအရင်ရှင်းအောင်ထား ပြီးမှကျန်တဲ့ကိစ္စတွေကိုရှင်းပါ။
ကိုယ့်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်အရင်ထားပြီးမှ ကျန်တဲ့ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားပါ။ စိတ်ရှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ဆုံးဖြတ်လိုက်တာတွေက အမှားများတတ်ပါတယ်။ မဆုံးဖြတ်ခင်မှာ သေချာစဉ်းစားပါ။
၂။ အခက်ခဲဆုံးအချိန်တွေက အောင်မြင်ဖို့ အနီးကပ်ဆုံးအချိန်တွေပါ။
ဘ၀မှာ အခက်ခဲဆုံးသောအချိန်တွေကို ဖြတ်သန်းနေရပြီဆိုရင် အခုထက်ပိုကောင်းတာ၊ ပိုအဆင်ပြေတော့မယ့် အချိန်ရောက်လာတော့မယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။ သာယာလှပတဲ့ မနက်ခင်းကိုရောက်ဖို့ မှောင်မိုက်တဲ့ညတွေကို ကျော်ဖြတ်ရတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့။
၃။ မရေရာတဲ့ အနာဂတ်အတွက် ကြိုတွေးပြီးမပူပန်ပါနဲ့။
လက်ရှိကြိုးစားနေတာက ဘာအတွက်လဲဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်လုပ်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လက်ရှိလုပ်ဆောင်နေတာတွေက နောင်တစ်ချိန်မှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်ပေးမှာပါ။ ပြီးဆုံးသွားတာတွေက ပြန်ပြင်လို့မရသလို ရောက်မလာသေးတဲ့ အနာဂတ်အတွက်လည်း ကြိုတွေးပြီးပူပန်မနေပါနဲ့။ လက်ရှိအခြေအနေကို ပြောင်းလဲနိုင်မှသာ အနာဂတ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်မှာပါ။
၄။ ကျရှုံးတာတွေကို ဆင်ခြေမပေးပါနဲ့ အောင်မြင်ဖို့အတွက်ပဲ နည်းလမ်းရှာပါ။
ဘယ်တော့မှ ဆုံးရှုံးသွားတာတွေ၊ ကျရှုံးသွားတာတွေအတွက် အချိန်ကုန်မခံပါနဲ့။ သင်ခန်းစာရယူဖို့ပဲကြိုးစားပါ။ သင်ခန်းစာတွေကိုသင်ယူမှသာ နောင်တစ်ချိန်အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချမှတ်နိုင်မှာပါ။ ဆင်ခြေပေးတတ်တဲ့ ပါးစပ်လေးပိတ်ပြီး ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းမှသာ အခက်အခဲတွေကပြေလည်ပြီး ဘာဆက်လုပ်ချင်လဲဆိုတာသိလာမှာပါ။ မဟုတ်ရင် ဆင်ခြေတွေနဲ့ပဲ လည်ထွက်နေပါလိမ့်မယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ဆင်ခြေပေးတတ်တဲ့အကျင့်တွေ၊ မလုပ်တတ်ဘူးဆိုပြီး ထိုင်ညည်းတတ်တာတွေလျော့ပါ။ စိတ်ကိုရှင်းအောင်ထားပြီး လုပ်စရာရှိတာတွေဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဘာကိုလိုချင်တာလဲ? ဘာတွေဖြစ်ချင်တာလဲ? ဆိုတာ သေချာသိလာနိုင်မယ့်အပြင် အောင်မြင်မှုလမ်းခရီးကို ကောင်းမွန်စွာလျှောက်လှမ်းနိုင်မှာပါ။
reference - wechat
Credit to Htoo Zaw Wai
Posted by Ltcho at 8:05 AM
Labels: Keys To Success, မှတ်သားဖွယ်ရာ စကားစုများ
မိတ်ဆွေ...အချိန်လေးရရင် blogg မှာစာလာဖတ်ပါနော်
" နံမည်ကြီး ဘာညာ ဝက်ဘ်ဆိုက် လုပ်ထား တဲ့ " ဒေါက်တာချက်ကြီး (ခ) ဖုန်းမင်း " ဆိုသူ ပါတဲ့။ စလုံး မှာလို့ ဆိုတယ် "
Ye Yint Nge shared Andrew Soe 's photo . ‎" နံမည်ကြီး ဘာညာ ဝက်ဘ်ဆိုက် လုပ်ထား တဲ့ " ဒေါက်တာချက်ကြီး (ခ) ဖုန်းမင်း ...
နှစ်သက်မိသော ဦးရဲထွဋ်ပို့ စ်အောက်က Comment. တစ်ခု
Tike ZN နှစ်သက်မိသော ဦးရဲထွဋ်ပို့ စ်အောက်က Comment. တစ်ခု ........ ......... ......... မူးယစ်​​ဆေး ကျပ်​သန်း ၉၀၀ ...
နည်းစနစ်ကျကျအတွေးအခေါ် တစ်ခါက. . . . ပေစုတ်စုတ်ကောင်လေးတစ်ယောက် ဟာ နွားပြာကြီးနဲ့အတူ ဆီဆုံမှာ ဆီကြိတ်နေသတဲ့။ ကောင်လေးက ...
Ohn Mar Oo 1. ဆာအိုင်းဆက်နျူတန် ( Isaac Newton ) ဆာအိုင်းဆက်နျူတန် ( Isaac Nweton ) ( 1642-1727 ) ကို ယနေ့ခေတ် သချာင်္သီအိုရီများကိ...
Ko Htike Linn Thu ‎ နည်းပညာ၊ အင်္ဂလိပ်​စာနှင့်​ ဗဟုသုတများ ၁။ မြန်​မာနိုင်​ငံအ​ကြောင်းသိ​ကောင်းစရာအချို့ (၁) ^^^^^^...
9Plus Myanmar ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ နေတဲ့အခါ တစ်ချို့အရာတွေ သိနေလျှက်နဲ့ မသိသလိုနေလိုက်တာ ပိုကောင်းပါတယ်.. တစ်ချို့အရာတွေ မြင်နေပါလျှက်...
ads.com.mm Options for this story • ဘယ်သူ့ကိုယုံမှာလဲ ••• တစ်ခါတုန်းက ဆရာမတစ်ယောက်က ကျောင်းသားတစ်ယောက်ကို အတန်းရှေ့ထွက်ပြီးစာ...
စာရင်းသမားတစ်ယောက်ရဲ့ ဒိုင်ယာရီ စာရင်းကိုင်ပညာနှင့်သက်ဆိုင်သော အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ ဝေါဟာရများ ========================== ==...
01-အေးဆေး 02-ဒီတစ်ခါဆောင်း 03-မျက်လှည့် 04-အမေ့မျက်ရည် 05-မင်းကလေးမှာနှာခေါင်းမရှိရင် 06-ညရဲ့လမင်း 07-ချူ 08-ကျွန်တော်အသည်း 09-ေ...
အဲ့လောက်ညံ့ တဲ့ ဘွဲ့ရတွေကတော့ ရင်လေးမိသည် မြန်မြာ...
Forget me! ငါ့ကို မေ့လိုက်ပါ
What's today's date? ဒီ​နေ့ ​ဘယ်​နှစ်ရက်​ရှိပြီလဲ
အသုံးတည့်​သည့်​ စကားများ ( ၁ )
##* ဘဝတွက်​ခွန်​အား *##
သင်ဟာ ဘာကြောင့် မပျော်ရွှင်ရတာလဲဆိုတဲ့ အချက် (၈)ချက...
( ၉ )နှစ်သားအရွယ် ကလေးငယ်တစ်ဦးက ပေးခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစ...
ဘာကြောင့် ၁၉၇၂ခုနှစ်ဟာ သမိုင်းတစ်လျှောက် အရှည်ကြာဆ...
#ချွေးနဲ့ ရှာထားတဲ့ ပိုက်ဆံ
ကလေးများကို ခံစားသင့်စေသော ဒုက္ခများ
Beautiful English Words (32) လှလှပပ အင်္ဂလိပ်စကား
" English Speaking For Everybody "
There is / There are နေရာစုံအောင် သုံးချင်တဲ့အခါ
လုပ်ငန်းခွင် ဝင်တော့မယ့် လူငယ်အတွက် အမှာစကား
အိပ်မက်တွေကို လွှင့်မပစ်လုိုက်ပါနဲ့
ဟိုမရောက် ဒီမရောက် Ought (to) ..တစ်ယောက်လူနဲ့အတွေ့...
အောင်မြင်ခြင်းသို့ တွန်းအား (သို့မဟုတ်) စာဖတ်ခြင်း...
ထပ်မပြောချင်တော့တဲ့ အကြောင်းအရာများ “so” နဲ့ အစားထ...
ပြီးတော့ .. "
"အီတလီပညာရေးစနစ်မှ အတုယူစရာများ" ― Dr. သိန်းလွင်
သူတို့ဆီက သင်ယူမိသောအရာများ (Edited)
ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်တစ်ခု ချမှတ်ပြီးတာနဲ့ အဲ့ဒီပ...
Steve Job ရဲ့အောင်မြင်ရေးသော့ချက် ၁၀ချက်
ဆုံးဖြတ်ချက်တွေ ဝေဝါးလာတိုင်းဖတ်ဖို့။ အချက်လေးချက်...
The Paradox of Our Time ကျွန်တော်တို့ ခေတ်၏ ကသိကေ...
Drop off ကို ဒီလိုတွေ သုံးလို့ရပါတယ်
Do ပါတဲ့ စာကြောင်းလေးများစွာကို စုဆောင်းမျှဝေပါသည်...
လူတိုင်းသိထားသင့်သော Johnnie Walker ပုလင်းမှ အရောင...
ပဲရစ်ရဲ့ မ်ိန်းမပျို သို့မဟုတ် နော်ထျာဒမ်ဝတ်ကျောင်...
အဖို ၊ အမ တွဲ စကားလုံးများ (Gender)
Bruce Lee ပြောခဲ့တဲ့ မှတ်သားစရာစကားများ
⚠️ မော်တော်ကားမောင်းနှင်သူတိုင်း မဖြစ်မနေ သိထားသင်...
စိတ်တိုတဲ့အခါ သုံးသော စကားလုံးများ (New)
Just keep going. ဆက်သာသွားလိုက်ပါ။
ဆရာဒီနေ့သင်မှာကတော့ Going to + v1, ပါ
အနောက်တိုင်းသားတွေ ဒီလိုကလေးကို ပျိုးထောင်ကြတယ်
အခက်အခဲတိုင်းအတွက် အခွင့်အလမ်းတွေ စောင့်ကြိုနေ ပါတ...
"တစ် နောက်က အဖိုးတန် သုညများ"
facebook မှာ ဟာသဗီဒီယိုတွေနဲ့နာမည်ကြီးနေတဲ့ဖြူဖြူေ...
ဘဝကိုကူညီမယ့်အချက် (၇) ချက် စီးပွားရေးမလုပ်ခင်မှာ ...
လ နဲ့ နေ ဘယ်သူကပိုအရေးပါသလဲ?
American English နဲ့ British English
Goals တွေကို ဘာကြောင့်ချရေးဖို့လိုတာလဲ ?
Self Awareness ကောင်းအောင် ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်မလဲ?
ကျရှုံးမှုကို စိန်ခေါ်မှုအဖြစ် အစားထိုးခြင်း
မလုပ်တတ်တာကို မလုပ်တတ်ဘူး ဝန်ခံပါ
လူတွေ ဘယ်အချိန်မှာ ရှုံးနိမ့်သလဲ
ချီး ပုံ ပြင်
စာဖတ်ခြင်းအကျိုး ၁၀ ပါး
အမျိုးသမီး၏ အတွင်းစိတ်ကို ထိစေသော စကားလုံးများ
ဂျပန်တွေဆီက အတုယူစရာကောင်းတဲ့အချက် ၇ချက်။
တူသလို မတူသလို ဖြစ်နေတဲ့ WHEN နဲ့ WHILE
" မင်းရဲ့အနာဂါတ်ဟာ မင်းဒီနေ့လုပ်ရပ်အပေါ်မှာပဲမူတည်ပ...
စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံဆိုတာ ဘာသာစကား တစ်ခုရဲ့ အခြေခံပ...
တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ရယ်မောအောင် လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ ယောကျာ်...
ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ အပျင်းရောဂါ ကုသနည်း
ဝေဖန်မှုတွေကြောင့် တွန့်ဆုတ်မနေဘဲ လုပ်ရမယ့် အရာကို ...
ဆူမို( 相撲すもう )
သမိုင်းတစ်လျှောက် သမ္မတသက်တမ်းတစ်နှစ်အတွင်း အအောင်ြ...
မစားသင့်သော ငါး ၉ မျိုး
Let's , Let အသုံးပုံစံ
ငါလည်း အူတက်နေပြီ ဆိုပြီး ပြောလိုက်တဲ့ G Fatt
သက်ရောက်မှုတိုင်းမှာ တန်ပြန်မှု ရှိပါတယ်။
ငွေ စီမံကိန်း အပိုင်း (၂)